I-HBO Max: I-League yezoBulungisa ku-Harley Quinn, yonke imixholo ekhethekileyo ye-DC - Itv
Eyona Itv Yonke imixholo ye-Exclusive Original DC eza kwiHBO Max
Yonke imixholo ye-Exclusive Original DC eza kwiHBO Max
I-HBO Max iya kuba likhaya elikhethekileyo kwi-avalanche yenkqubo yoqobo yeDC.WarnerMedia / HBO Max
Ukumangaliswa kunye neDC ukhuphiswano yeentliziyo, iingqondo kunye izipaji zabalandeli beencwadi ezihlekisayo kwakudala ngaphambi kokuba iHollywood idliwe zii-capes kunye neenkomo. Kule minyaka ingama-20 idlulileyo, eli dabi liye laxhuma kumaphepha ahlekisayo ukuya kwiscreen esikhulu njengoko iifilimu ezinkulu ze-blockbuster ziye zaba ligazi lobomi be-franchise. Ngoku, ungquzulwano lufumene kwakhona indawo entsha yedabi kumaqonga okusasaza. Umbono weWandaVision kukungena nje kokuqala kokuya kuba bubukhosi bescreen esincinci seMarvel kwiDisney +. Ngokufanayo, i-HBO Max iye yaba yi-vanguard yokwandiswa kwescreen se-DC kwikamva.
Zombini ezi studio ziye zanyikima iscreen esincinci ngaphezulu kwe-ABC, i-CW, iFreeform, iNetflix, iHulu kunye neDC Universe. Kodwa iDisney + kunye neHBO Max zezona zibhejayo zizigidi ngezigidi kwikamva leenkampani zabazali. Sele siyazi Yintoni onokuyilindela kuMangaliso Kwangaphambili kwixesha elizayo, kodwa uthini malunga neyokugqibela? Nalu ulwazelelo lwenkqubo ye-DC ezayo ye-HBO Max eya kuhlala kuyo kuphela.
ILigi yezoBulungisa kaZack Snyder (Matshi 18)
Ngaphandle kwengxelo eziphikisanayo kunye nokudideka kwiinyanga ezikhokelela kuZack Snyder's I-Justice League ekugqibeleni ufika kwi-HBO Max, ayibalulekanga kangako ukuba inguqulelo entsha iya kuba Imovie yeeyure ezine okanye inkonzo veki nganye . Ekugqibeleni, uWarnerMedia waziva ekhululekile ukuchitha i-70 yezigidi zeedola ukugqibezela umbono wokuqala kaSnyder kunye nokwakha ithala leencwadi likaMax nge incoko yenza i-superhero blockbuster . Ukuyithanda okanye ukuyithiya, baphumelele ukusenza ukuba sonke sithethe ngayo, kwaye yinto leyo.
Ukujongwa kweDoom Ixesha lesithathu
I-WarnerMedia yasungula ibhloko yokwakha ye-HBO Max kunyaka ophelileyo kwaye ngequbuliso yaqonda ukuba kufuneka idibanise iinzame zayo ezininzi zokusasaza. Ke, umxholo wokuqala we-DC Universe wawunjalo ishukunywe ngokukodwa kwi-HBO Max. Oku kubandakanya ixesha lesithathu le-gonzo ngokupheleleyo kodwa liyonwabisa kakhulu Ukujongwa kweDoom , ekulindeleke ukuba ifike eqongeni ngaxa lithile ngo-2021. Kude kube lelo xesha, amaxesha amabini okuqala-ajikeleza liqela elingasebenzi kakuhle kodwa elinyanzelayo — ngoku ayafumaneka. Bukela I-HBO Max .
Abakwishumi elivisayo abathandekayo kancinci kwaye ubanika uChristopher Nolan ubumnyama-n-gritty. URobin, Starfire, Raven, kunye neBeastboy baquka iqela eliphambili, kodwa amaqhawe ongezelelweyo avela kulo lonke uluhlu lwe-DC Comics ajoyine iziqendu ezilandelayo. Ixesha lesithathu kulindeleke ukuba liqale ekuqaleni konyaka wama-2021. Bukela I-HBO Max .
Umboniso obalaseleyo okanye umboniso bhanyabhanya DC upheke ngexesha leDCEU . Kukungabi nantlonelo ngokungapheliyo kodwa ngandlela thile ekwakheni ubudlelwane obufumene kakuhle bezinto eziphilayo. Nguloliwe obalekayo wee-callbacks ezimnandi, izingqinisiso, kunye neembeko kwimbali ye-DC yabalandeli be-hardcore ukuba bayonwabele, kodwa akunzima ukuthembela kulwazi lwangaphakathi lokonwabisa kunye nokunyanzela. Ixesha le-3, elingalindelwanga kude kube sekupheleni kuka-2021, alinakufika ngokukhawuleza ngokwaneleyo kubalandeli abalambileyo. Bukela kuyo I-HBO Max .
Ubulungisa obutsha Ixesha lesi-4
Harley Quinn ibambe indawo ekhethekileyo ezintliziyweni zethu kwaye Ubulungisa obutsha ayikude ngasemva. Uthotho lwee-animated lubonakalise ukuba ngamabhongo ngokungalindelekanga, ziphinda zizibuyisele ixesha ngalinye lokuhamba kunye nokutsiba kwexesha okushukumisa uluhlu lwabalinganiswa abaphambili kunye namacebo aphambili ekudlaleni. Olu chungechunge lwenziwe ngobuqili ngakumbi kunokuba ubuya kulindela kumndilili ojolise kubantwana, unika abaphulaphuli abadala into abanokuyifaka. Ngokubanzi, kunyango kuye nawuphina umntu okonwabela ukudibana phakathi kwamaqhawe aphambili e-DC kunye noqeqesho lwabo oluninzi kunye nabaphumeleleyo ekugqibeleni. Ixesha le-4 liya kuqala kwi-HBO Max ngo-Agasti 24. Bukela kuyo I-HBO Max .
Ukurhweba ngokuthengisa iimveliso eziphambili kunye nokusebenzisa iprofayile ephezulu ye-IP ukuqhubela phambili kwimizamo yayo encinci yesikrini. Oko kufikelela kuMat Reeves ’ IBatman Kudlala uRobert Pattinson, oza kufumana unyango lwe-prequel spinoff. Olu luhlu luya kwenzeka kunyaka omnye ngaphambili IBatman Ngexesha leenyanga zokuqala ezili-12 zomsebenzi weCaped Crusader eGotham City. Iya kujikeleza kwimpendulo yesebe lamapolisa elikhohlakeleyo kumlindi ogqubutheleyo ogqubutheleneyo ebetha izaphuli-mthetho ezisekhohlo nasekunene. UJoe Barton Giri / Hajj Uthathe indawo kaTerence Winter ( Ubukhosi beBhodiwalk ) Njengombonisi. Uthotho alulindelanga ukuba luboniswe kude kube lixesha elithile emva IBatman Ukukhululwa kwasekuqaleni kuka-2022.
Enye yezona zinto sizilindeleyo ze-HBO Max DMZ , esekwe kwinoveli yemizobo egunyazisiweyo enegama elifanayo eyenzeka eMelika ngekamva apho kuqhambuka iMfazwe yamakhaya kunye nokunyanzela iManhattan ukuba ibe yindawo enabantu abaphantsi kwezomkhosi. I-Ava DuVernay ( Xa Basibona ) uyalela umqhubi wenqwelomoya kunye nomlingisi obandakanya uRosario Dawson noBenjamin Bratt. Amacandelo amane athintelweyo aya kuqala ukuvelisa kulo nyaka.
Uluhlu oluphambili lwabalinganiswa luya kubandakanya izibane zabantu u-Alan Scott, uGuy Gardner, uSimon Baz noJessica Cruz, kunye neLanterns Sinestro kunye neKilowog. Kodwa malunga nokuphosa kunye neenkcukacha zesakhiwo, uqikelelo lwakho lulungile njengolwethu okwangoku.
yeyiphi iipropathi yena kunye neqela lakhe le-Bad Robot bangaqala ukukhokela. Ngo-Epreli ophelileyo, kwavezwa ukuba i-Bad Robot yayiza kuqala ngokwenza uthotho lwe-HBO Max, kubandakanya Ubulungisa beLigi yoBulungisa . Ngelixa kuncinci kwindlela yohlaziyo lwekhonkrithi ukusukela, umhleli weTV Line kwintloko uMat Webb Mitovich ixelwe Kwinyanga ephelileyo lo mboniso usaqhubeka. Mhlawumbi ukuthula ixesha elide kunento yokwenza nenye ingxelo yakutshanje…
Kwangoko kule veki, i-Illuminerdi ixelwe ukuba iAbrams 'Bad Robot Productions iphuhlisa ubumbeko olutsha nolumnyama ngakumbi UConstantine ipropathi ngethemba lokuphosa umdlali weBIPOC kwiminyaka yabo engama-20. UGuy Bolton usekwe ukuba abhale. Umlingiswa ubekhe waboniswa kuthotho lwe-NBC, i-CW's Arrowverse, kunye nefilimu kaKeanu Reeves ka-2005 kunye nokubonakala okungabalekiyo kwimali yokuhamba. Umlinganiswa uhlala enxulunyaniswa Ubulungisa beLigi yoBulungisa , enokwenza ukubhangqwa okuhle kwiHBO Max. Akukho mhla wokukhutshwa ubekiweyo.
DC Superhero ePhakamileyo
Ukuze ungabambeki kakhulu kwiipropathi ze-DC ezimdaka, ezimnyama, kunye ne-horror-centric, DC Superhero ePhakamileyo iya kuba sisiqingatha seyure sokudlala. Njengoko unokuthekelela kwisihloko, uthotho luya kubona iinguqu ezincinci zamaqhawe e-DC onke ahamba nobunzima besikolo samabanga aphakamileyo kunye. Amaqhakuva, ukufikisa kunye nesikolo sikarhulumente. Njalo i-classic trio. U-Elizabeth Banks ngumphathi ovelisa. Akukho mhla wokukhutshwa ubekiweyo.
Babengoobani? Inyaniso ngasemva kweStieglitz's Iconic Photograph 'The Steerage' ityhiliwe
Owayesakuba lilungu leBhodi kaWhitney uWarren Kanders uthi iShishini lakhe alisayi kuphinda lithengise iRhasi yeinyembezi
yayifakwe phi i-365 dni
UChris ngumtyali mali weengelosi oku kuthetha ukuba yena
thenga ioyile ye-vc ye-vape
Ihlabathi lokwenyani likhulu okanye liye ekhaya isiqendu 2
Ihlabathi lokwenyani likhulu okanye ligoduke